Mushaaraadka Race 3: Salman Khan oo lix laab ka lacag badan Anil, Jacqueline, Bobby – Filimside.net
Mushaaraadka Race 3: Salman Khan oo lix laab ka lacag badan Anil, Jacqueline, Bobby
Taariikhda: June 11, 2018
Filimka weyn Race 3 oo miisaaniyad 160 Crore ka badan xambaarsan Jimcadaan ayaa tiyaatarada la saari doonaa waana filim si waali ah loo wada sugaayo sidoo kalena ay sii bilaabatay in si hormaris ah tikityadiisa loo sii iibsado.
Race 3 waxaa Director ka ah Remo D’Souza’ halka Salman Khan iyo Ramesh Taurani ay isla maal galiyeen waxaana la aaminsan yahay filimkan Action-ka ah inuu tiyaatarada gil gili doono Ciidul Fitrigaan.
Inkastoo Salman Khan uu Race 3 soo saare ka yahay sidoo kalena fagta hore uu lacag ku sameeyay haddana waxaa la sheegay in haatan 60 Crore ($9.09M) hormaris ah lacagaha laga helay filimkan ka hor inta aan tiyaatarada la saarin sidoo kalena hadhow marka tiyaatarada la saaro dibad iyo dal macaashka laga helo waxay isla qeebsan doonaan shirkada Tips ama Ramesh Taurani oo Salman la maal galinaayo filimkan.
Salman Khan lix laab wuxuu ka mushaar badan yahay sameynta Race 3 dhamaan jilaayaasha kale ee mashruucaan weyn kasoo muuqdeen midka kusoo xigana dhanka lacagaha waa ruug cadaa Anil Kapoor oo sameynta Race 3 ku qaatay 9 Crore ($1.36M).
Jacqueline Fernandez oo ah atirishada kowaad filimkan waxaa sameynta Race 3 lagu siiyay 8 Crore ($1.21M) sidoo kale Bobby Deol oo ah atooraha labaad filimka Race 3 isagana sameynta filimkan waxaa lagu siiyay 7.50 Crore ($1.14M) waana lacag heer sare ah marka loo fiiriyo Bobby in haatan suuq uusan laheyn mudo afar sano saaxada ka maqnaa.
Daisy Shah sameynta Race 3 waxay ku qaadatay 5.20 Crore ($787,879), Freddy Daruwala oo ah laadarka Race 3 isagana 2 Crore ($303,030) halka Saqib Saleem isagana doorkiisa Race 3 lagu siiyay 1.40 Crore ($212,121).
Race 3 waa inuu 200 Crore ugu yaraan soo xareeyaa si uu u noqdo mashruuc faa’iido laga helo waana mid lagu kalsoon yahay madaama goos gooskiisa Action-ka u badan iyo heesihiisa siweyn u hirgaleen.
Waxaa Aqrisay 1,991